Global Voices မြန်မာ » ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း ကလေးငယ် ၁၅၀ ကို မွေးစားခဲ့သူ ကာဂျစ် အမျိုးသမီးကို အောက်မေ့ အမှတ်ရခြင်း · Global Voices မြန်မာ » Print
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း ကလေးငယ် ၁၅၀ ကို မွေးစားခဲ့သူ ကာဂျစ် အမျိုးသမီးကို အောက်မေ့ အမှတ်ရခြင်း
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ5နိုဝင်ဘာ 2015 1:10 GMT 1	 · ရေးသား​သူ Zukhra Iakupbaeva ဘာသာ​ပြန်​သူ Juan Cebu
အမျိုးအစားများ: ကာဂျစ္စတန်, ပြည်သူသတင်း, သမိုင်း, အမျိုးသမီး​နှင့် ကျားမကွဲပြားမှု
၁၉၄၂ ခုနှစ် လီနင်ဂရတ်မြို့ကို ပိတ်ဆို့ဝန်းရံ တိုက်ခိုက်ခြင်း ကာလ၌ ဗို(လ်)ကိုဗို သင်္ချိုင်းတွင် အလောင်းများကို ယောက်ျား ၃ ဦးမှ မြှုပ်နှုံနေစဉ်။ Boris Kudoyarov, RIA. Licensed to reuse.
“ဒဏ္ဍာရီ တွင်သူ” ဆိုသော စကားလုံးမှာ ရုရှားနှင့် ကာဂျစ် မီဒီယာတို့က ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း လူတစ်သန်းလောက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော လီနင်ဂရတ်မြို့ ၂ နှစ်ခွဲကျော် ပိတ်ဆို့ဝန်းရံ တိုက်ခိုက်ခံရစဉ်တုန်းက ထွက်ပြေးလာသော ကလေးငယ် ၁၅၀ ကျော်ကို ခိုလှုံရာ ပေးခဲ့သူ အသက် ၉၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် တော့(ခ်)တိုဂွန် အယ်တီဘာဆာရိုဗာ ကို ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုရန် သုံးသော စကားလုံးဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့က ကွန်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အယ်တီဘာဆာရိုဗာ ဟာ သူမ အသက် ၁၆နှစ် ၁၉၄၂ ခုနှစ်တုန်းက နာဇီဂျာမဏီတို့က ယခု စိန့်ပီတာစဘက်ခေါ် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ လီနင်ဂရတ်ကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ရာတွင် ထွက်ပြေးလာသူများကို ဝေးလံခေါင်ဖျားသော ကာဂျစ္စတန် အရှေ့မြောက်ပိုင်း သူမ၏ နေအိမ်ကျေးရွာ ကူမန်တီ တွင် ဒေသခံစက်ရုံ ဝန်ထမ်းအဆောင် တစ်ခု၌ လက်ခံခေါ်ယူကာ ငတ်မွတ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တုန်းက သူမသည် သူမ၏ ကျေးရွာကောင်စီ၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံခဲ့ရကာစဖြစ်သည်။
Wikipedia မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။
အယ်တီဘာဆာရိုဗာ သည် ကလေးများ၏ အသက်အရွယ်တွေကို ဆုံးဖြတ်ပေး ပြီး သူတို့ကို နာမည်များပေးခဲ့သည့်။ ပြုစု စောင့်ရှောက်သူများပါဝင်သည့် အဖွဲ့ကို ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ကာ သူမသည် ကလေးတွေ လူလားမြောက်ပြီး ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ ဒေသမျိုးမျိုး၌ အလုပ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ပညာသင်ကြားရန် အသီးသီးသို့ ထွက်ခွာသွားသည်အထိ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည်။
ကာဂျစ္စတန် နိုင်ငံတော် ရုပ်သံလွှင့်ဌာန၏ အဆိုအရ အယ်တီဘာဆာရိုဗာသည် သူမသေဆုံးသည်အထိ သူမ၏ မွေးစားသားသမီးများမှ ရေးပို့လာသောစားများကို အမြတ်တနိုး သိမ်းစည်း ထားခဲ့သည်။
ကာဂျစ္စတန်၏ သမ္မတ အယ်မာ(ဇ်)ဘက် အာတမ်ဘာရက်(ဗ်) (Almazbek Atambayev) သည် ဗီဒီယိုတွင် မိန့်ခွန်း ပေးခဲ့မှာ။ ။
၁၉၄၁-၁၉၄၅ ပြည်ကြီးစစ် (the Great Patriotic War)အတွင်းက တော့(ခ်)တိုဂွန် အယ်တီဘာဆာရိုဗာဟာ ဝန်းရံတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ လီနင်ဂရတ်မြို့က ကလေး ၁၅၀ ၏ မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ တော့(ခ်)တိုဂွန် အယ်တီဘာဆာရိုဗာ ၄င်းကလေးများ၏ မိခင်များ နေရာမှ ဝင်ကာ ကလေးများကို ဂရုစိုက်မှု စေတနာ၊ ကရုဏာတို့နှင့် ဝန်းရံထားပြီး ရင်းနှီးမှု၊ နွေးထွေးမှုတို့ကို ပေးစွမ်းခဲ့သည်။
အယ်တီဘာဆာရိုဗာ သည် သူမ ကိုယ်ပိုင် သားသမီး ၈ ဦး၊ မြေး ၂၃ ဦး နှင့် မြစ် ၁၂ ဦး လည်းရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဟာ သူမ၏ အသုဘကုန်ကျစရိတ်များအတွက် သုံးစွဲရန် ကာဂျစ်ငွေ တစ်သိန်း (ဒေါ်လာ ၁၇၀၀ ခန့်) ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ကာဂျစ် သတင်း ဝက်ဘ်ဆိုက် Vecherni Bishkek ၏ ဆောင်းပါး တစ်ခု၏ အောက်တွင် စာဖတ်သူများသည် အယ်တီဘာဆာရိုဗာ၏ အသက်ရှည်ခြင်းကို ဂုဏ်ပြုကြသည်။
ဒီနေရာဟာ လူတစ်ဦး၏ စစ်မှန်တဲ့ တခြားလူအပေါ်ထားတဲ့ ဆက်ဆံရေး၏ ဥပမာတစ်ခုပါ။ သူမ၏ ကလေးများကိုလည်း သူမလိုဖြစ်လာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တကယ် စစ်မှန်တဲ့ လူသားတွေအဖြစ်။
အယ်တီဘာဆာရိုဗာ၏ သမီးဖြစ်သူဟု ဆိုသူတစ်ဦးကလည်း ဆုမွန်ကောင်းပေးသူတို့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလေသည်။ ။
ကျွန်ုပ်၏ အမိ​​ တော့(ခ်)တိုဂွန် အယ်တီဘာဆာရိုဗာ သို့ ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာပို့ခဲ့သော သူတို့ကို ကျေးဇူးများစွာ တင်လှပါသည်။ သင်၏ အထောက်အပံ့ နှင့် ကြင်နာသော စကားများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လီနင်ဂရတ်၏ ကလေးများနှင့် သူတို့၏ ကျင်နာတဲ့ အမှတ်တရဖွယ်ရာများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
URL to article: https://my.globalvoices.org/2015/11/1193